Jiri ụgbọ mmiri Arduino wuo ya ma jiri 3D na-ebi akwụkwọ ihe eji emepụta drone eji eme ụlọ | Akụrụngwa n'efu
Site na bọọdụ Arduino ma ọ bụ bọọdụ Rasberi ị nwere ike iwulite ngwa ọ bụla. Obi abụọ adịghị ya na nke a, mana ruo taa, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole bụ ndị jisiri ike jiri bọọdụ Arduino rụọ ụgbọ mmiri na-efe efe.
Onye nọ n'afọ iri na ụma aha ya Nikodem Bartnik kere ụgbọ mmiri na-efe efe na-efe efe, Ngwaọrụ ụgbọ elu nke otu Arduino na-achịkwa, na nke a ụdị MPU-6050. Quadcoptero bu ihe nlere anya na aru oru na kwa ihe nlere anya nke anyi puru ime n’oge obula.
Nikodem Bartnik jiri onye nbipute 3D nke ya iji mepụta usoro nke ụgbọ elu na-efe efe ga-enwe. N'ime ụlọ a, ọ gbakwunyere ndị na - akwalite ya, motọ ya, batrị na - ebugharị ya na osisi Arduino MPU-6050. Mpempe MPU-6050 bụ onye na-achịkwa ọrụ niile nke ụgbọ elu na-efe efe yana jikọọ na njikwa dị na Bartnik kere ijikwa ụgbọ elu.
Nikodem Bartnik emepụtala mmiri eji eme ụlọ site na ibe Atmega na onye nbipute 3D
Ka i si hụ, ihe mejupụtara mmiri a dị ọnụ ala ma dịkwa mfe inweta. Na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwa obibi 3D n'ụlọ anyị. Otú ọ dị, ihe dị otú ahụ adịchaghị mfe na-enweghị koodu mmemme. Ọ bụ ya mere akwụkwọ Instructables nke ọrụ ahụ ji baa oke uru.
Bartnik ebipụtala ọrụ niile na peeji Instructables ya mere onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji ntuziaka ka ọ rụọ ụgbọ mmiri nke ha. Na weebụ anyị ga-ahụ ọ bụghị naanị sọftụwia na ndepụta zuru ezu nke akụrụngwa kamakwa ebipụta faịlụ anyị nwere ike iji n'efu na n'efu.
Ihe oru ngo a ka choro otutu oganihu iji mee ka o di ka ndi oru drones, ma n’enweghi obi abua obu oru ngo na-adọrọ mmasị iji kpuchie mkpa ndị bụ isi, ya bụ, ịnweta mmiri na-efe efe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Jiri dọkụmentị Arduino wulite ya na ngwa nbipute 3D